Etu ị ga-esi weghachite faịlị na USB flash drive mgbe USB flash drive enweghị ike imeghe-Airy data recovery
Etu ị ga-esi weghachite faịlị na USB flash drive mgbe USB flash drive enweghị ike imeghe
72 2021-05-02 11:31
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na enweghi ike imeghe U disk. Anyị nwere ike ịnwale naanị ngwọta ga - ekwe omume otu otu. Ma ọ bụrụ na ịchọta ihe kpatara nsogbu ahụ, ọ dị mfe idozi nsogbu ahụ. Onye editọ na-esonụ ga-enye gị ụzọ ole na ole iji dozie nsogbu ahụ na enweghi ike imeghe U disk, enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.
Mgbe anyị tinyere USB flash drive na kọmpụta anyị, mana achọpụta na enweghị ike imeghe kọntaktị USB, biko atụla ụjọ n'oge a, gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB?
Kụziere gị otu esi edozi nsogbu ahụ na kọmputa enweghị ike imeghe kọntaktị USB.
Pịa aka nri na ihe ntanetị USB wee pịa Njirimara.Na windo mmapụta mma, pịa Ngwaọrụ-Start Check Ihe kachasị kpatara na enweghị ike imeghe kọntaktị USB bụ na faịlụ faịlụ mebiri emebi. Commonzọ a na-ahụkarị maka nke a bụ imezi diski ahụ. Pịa aka nri na aka nri “Disk iwepu” ma hota “Njirimara” site na menye menu
Mgbe ahụ gbanwee gaa na taabụ "Ngwaọrụ" na windo meghere, pịa bọtịnụ "Error Check Start Check", lelee ihe abụọ dị na windo mmapụta, ma mesịa pịa bọtịnụ "Malite" iji lelee ma mezie njehie disk.
Mgbe mmezi ahụ zuru ezu, ịnwere ike ịnwale imeghe U disk!
Mgbe usoro dị n'elu adịghị emeghe imeghe U disk, a na-atụ aro ịhazi disk U. Pịa aka nri na aka nri “Disk iwepu” wee hota “Format” na menu di aka di mma. Na windo "Hazie" mepee, wepu "Nhazi ngwa" wee pịa bọtịnụ "Malite".
Mgbe ịmechara arụmọrụ ndị a dị n'elu, ọ bụrụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB, gbalịa dochie eriri USB na ọdụ USB. N'otu oge, jide n'aka na kọmputa mobile nchekwa metụtara ọnọdụ nhọrọ na-adịghị nkwarụ. Specific ikiri na mwube ụzọ: Mepee "Run" igbe na tinye iwu "gpedit.msc" ịbanye Group Policy Manager.
Na windo njikwa njikwa otu, pịa "Mọdụl njikwa" → "Sistem" → "Mbugharị Nchekwa Mbugharị" n'aka nke ya, ma gbaa mbọ hụ na "Diski Mbugharị: Gọnarị Ikike Ikike" na "Disk Nwepu Mbupu: Gọnarị Ikike Ikike" n'aka nri "Edere ihe abụọ ahụ na" Emeghị ahazi ya "ma ọ bụ" nkwarụ ". Ọ bụrụ na ọ bụghị, pịa ihe kwekọrọ na ya ugboro abụọ, lelee ihe "Nkwarụ" na windo mmapụta wee pịa "OK".
Ọ bụrụ na enweghi ike imeghe U disk mgbe usoro ndị a dị n'elu, ịnwere ike iji ngwa ọrụ mmepụta U disk mee ịrụ ọrụ nrụzi. Nke a bụkwa ụzọ kachasị dị irè iji dozie nsogbu U disk.
Mgbe anyị tinyere USB flash drive na kọmpụta anyị, mana achọpụta na enweghị ike imeghe kọntaktị USB, biko atụla ụjọ n'oge a, gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB? u Start na-akuziri gi otu esi edozi nsogbu nke komputa a enweghi ike imeghe u disk.
1. Pịa aka nri na USB flash mbanye wee pịa Njirimara, pịa "Ngwaọrụ" - "Malite Lelee" na windo mmapụta windo, pịa nhọrọ niile na windo mmapụta Diski windo, wee pịa Malite, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ:
2. Gbalịa imepe USB flash drive iji hụ ma ọ ka nwere ike imeghe, wee pịa igodo ụzọ mkpirisi win + r iji mepe windo ahụ na-agba ọsọ wee banye gpedit.msc, dịka e gosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ:
3. Na "Onye nchịkọta akụkọ mpaghara mpaghara", pịa "Mọdụl njikwa-sistemụ nchekwa ewepụ" n'aka nke ya, wee chọta "Disk iwepụ: Gọnarị Ikike Ikike" na "Diski niile nke Mbugharị:" na ndepụta ahụ n'aka nri. ikikere "ihe abụọ, dị ka egosiri na onu ogugu: Ulo nke U Disk
Mepee ihe abụọ dị n'elu n'otu n'otu, gbanwee nhazi ha na "emezighị ahazi" ma ọ bụ "nkwarụ", wee pịa "OK", dịka e gosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ:
Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na kọmputa enweghị ike imeghe USB flash mbanye Ọ nwere ọtụtụ ihe ngwọta, ụzọ abụọ a dị n'elu bụ usoro anyị na-ejikarị eme ihe.Gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị ike imeghe USB flash mbanye na - enweghị enyemaka nke mmezi mpụga? ngwanrọ? Naanị nwalee usoro ndị a.
Atọ: Enweghị ike imeghe U disk, na-akpali ihe kpatara ịhazi
Enwere ike imeghe diski, diski diski mobile, kaadị SD na ngwaọrụ nchekwa ndị ọzọ na ịpị ịpị abụọ. Gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na agaghị m echezọ ya n'ihi na enwere data dị mkpa na USB flash mbanye na data anaghị akwado? Atụla ụjọ mgbe ị zutere ụdị ọnọdụ a, lee, m ga - akuziri gị otu esi edozi nsogbu nke ịhazi mgbe USB flash drive enweghị ike imeghe.
Enweghị ike imeghe U disk, na-akpali usoro
U disk bụ ngwa nchekwa data ama ama ama nwere ọghọm.Ọ nwere obere ọdịdị, ohere nchekwa buru ibu, dịkwa mfe iburu, nke mere ka ọ bụrụ ngwa nchekwa ama ama. Ma na ụlọ ọrụ kwa ụbọchị ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị, ị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ U disk. Ebe ọ bụ na ejiri USB flash mbanye ọtụtụ oge, ndị ọrụ ga-ezutekarị nsogbu dị iche iche metụtara eriri flash USB, nke kachasịkarị bụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB wee kpalite usoro.
Mgbe ịtinye eriri flash USB n'ime ọdụ ụgbọ USB nke kọmpụta ahụ, mepee onye njikwa faịlụ ahụ ma ị nwere ike ịhụ akwụkwọ ozi draịva nke USB flash drive Mgbe onye ọrụ ahụ pịa Cable flash ya ugboro abụọ iji gbalịa imepe USB flash drive, enweghị ike imeghe USB flash drive, sistemụ ahụ na - apụta windo na - egosi "diski dị na draịva K: ọ dị mkpa ịhazi ya tupu i jiri ya. want chọrọ ịhazi ya" ma ọ bụ "A naghị ahazi diski na draịvụ H. ị chọrọ ịkpụzi ya ugbu a? "
N'oge a, ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ "Nhazi Disk", usoro ahụ ga-agbapụta windo nhazi. Mgbe ịhọrọ usoro faịlụ ahụ, pịa OK ka ịhazi U disk. Agbanyeghị, ịhazi ihe ga - ebute ọnwụ data na USB flash drive. Ọ bụrụ na data dị na USB flash drive dị mkpa, agbasaghị ya.
Formating USB flash mbanye na-egosi na formatting nsogbu nwere ike ịbụ ihe dị iche iche mere. Ndị ọrụ dị iche iche na-ezute ọnọdụ dị iche iche, ya mere, ihe ndị a agaghị abụ otu. Onye editọ ebe a depụtara ụfọdụ ihe kpatara ya.
A na-agbaji diski USB, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, agbanyela USB flash na USB flash drive enweghị ike iji ya mee ihe ọ bụla; ma ọ bụ na njiri nke eriri USB adịgboroja erughị eru, mgbawa nchekwa nke USB flash drive ma ọ bụ onye njikwa isi mebiri. Enwere nsogbu na ọdụ ụgbọ USB kọmputa. Computersfọdụ kọmputa enweghị ọdụ ụgbọ USB ma ọ bụ ezughi oke inye ike, nke nwere ike ibute ngwaọrụ ndị dị na mpụga dịka U disks anaghị eji ya eme ihe. Na nke a, ịnwere ike ịnwale njikọ eriri USB na kọmputa ndị ọzọ. Enwere nsogbu na onye ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụrụ na onye na-anya kọmputa ahụ mebiri emebi ma ọ bụ mee agadi, ọ nwekwara ike ịkpata nsogbu a. Nkebi na USB flash mbanye emebi. Enweghị ike pịa "Safely Wepu Akụrụngwa na Wepụ Media" tupu ịkwụpụ U disk na kọmputa, na-ebute mmebi nkebi. Nje Virus ma ọ bụ mmebi malware. Nje virus ma ọ bụ sọftụwia jọgburu onwe ya na-ebibi data dị oke egwu na draịvụ USB, na-eme ka data ghara inwe ike ịnweta ya.
Enweghi ike imeghe U disk, na-eme ka usoro ihe nhazi dị
Ọ bụrụ na data dị na kọntaktị USB dị mkpa ma akwadoghị data ahụ, mgbe ahụ usoro nnwere onwe ziri ezi kwesịrị ịbụ: weghachite data sitere na USB flash drive, wee mezie nsogbu USB flash drive.
Mara: Emela arụmọrụ chkdsk na U disk tupu ịghaghachi data site na diski U, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-emezi chkdsk naanị, nke ga-emetụta mmetụta data mgbake ahụ.
Kedụ ka m ga - esi nwetaghachi data site na USB flash drive mgbe USB flash draịva enweghị ike imeghe wee kpalite usoro? Nsogbu yiri nke gbagwojuru anya dị mfe. Dị ka ogologo oge dị ka a pụrụ ịdabere na mgbake software, nkịtị ọrụ nwere ike mfe dozie nsogbu nke na-agbake data si U disk. Ka anyị lee usoro nke ịchọpụta data site na U disk:
Nzọụkwụ 1: Fanye USB flash mbanye n'ime USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa nke mere na kọmputa nwere ike ịmata USB flash mbanye, na mgbe ahụ na-agba ọsọ ahụ data mgbake software DiskGenius na kọmputa.
DiskGenius bụ ike nkebi management na data mgbake software na ike data ọrụ na ike ijikwa data ọnwụ nsogbu si dị iche iche nchekwa na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ eriri flash USB n'akụkụ aka ekpe nke ngwanrọ DiskGenius (ebe a ịkwesịrị ịhọrọ ụdị ihe ntanetị USB, RD1 + nọmba ọnụọgụ), wee pịa bọtịnụ "Naghachi".
Mara: Ọ bụrụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB, ọ na-akpali usoro, na-egosi na nkebi ahụ na USB flash mbanye emebi. Nkebi emebi abụghị nkebi emebi, ya mere ọ dịghị mkpa ịchọ furu efu nkebi ebe a.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ọnọdụ mgbake wee pịa bọtịnụ "Malite".
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime nyocha miri emi nke USB flash draịva, ikwesiri ịlele nhọrọ“ Complete Recovery ”na“ Extra Scan for Known File Types ”n’otu oge; na mgbakwunye, ọ bụrụ n’ ị maara ụdị ụdị faịlụ a ihe ntanetị USB tupu ị kpalite maka nhazi, ị nwere ike pịa bọtịnụ "Advanced" Nhọrọ iji họrọ ụdị sistemụ faịlụ nke U disk tupu nsogbu ahụ amalite, nke nwere ike melite arụmọrụ mgbake.
Nzọụkwụ 4: Prehụchalụ faịlụ na-ekpe ikpe ma faịlụ nwere ike weghachiri eweghachi kwesịrị.
DiskGenius ga - edepụta faịlụ ndị achọtara n'oge nyocha ma melite nsonaazụ ahụ na ozugbo. Ọrụ nwere ike ịhụchalụ akwụkwọ n'oge ma ọ bụ mgbe ịgụ isiokwu. Site na ịhụchalụ faịlụ ahụ, ịnwere ike ịchọta faịlụ ịchọrọ ịghachite ma chọpụta ma faịlụ ahụ emebila. N'ụzọ nke a, tupu n'ezie mgbake, ị nwere ike n'ụzọ zuru ezu ịghọta ihe ịga nke ọma ọnụego nke data mgbake.
Kwụpụ 5: Wepu akwụkwọ ndị achọrọ. Tinye akà rà faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na Doppler results, mgbe nri-pịa òké ma họrọ "Detuo na Kpọmkwem nchekwa". N'ihi ya, ị nwere ike họrọ a ọnọdụ ịzọpụta natara data.
Nzọụkwụ 6: Lelee data ndị natara Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na enwetala data ahụ, ịnwere ike iji DiskGenius iji kọwaa U disk. Mgbe emechara, enwere ike imeghe U disk ma chekwaa data.
Dịka e kwuru n’elu, ọ bụrụ na ị zute nsogbu nke ịhazi mgbe USB flash drive enweghị ike imeghe, atụla ụjọ ma ghara ịhazi eriri flash USB. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụhaala na enweghị nnukwu ọdịda nke USB flash mbanye, enwere ike iweghachite data dị na draịva USB. Mgbe e mechara weghachite data na diski U, ị nwere ike gbalịa ịkpụzi diski U iji rụzie nkebi ahụ mebiri emebi.
Ọ dịghị njọ na enweghị ike imeghe U disk.M ga-akụziri gị ụzọ atọ iji mee ya.
N'ozuzu, enweghị ike imeghe draịva USB site na ịpị mmadụ abụọ, ọ kachasị n'ihi na faịlụ faịlụ nke eriri USB mebiri emebi. Ya mere ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ehichapụ nje ahụ, ịpị abụọ ka na-emeghe, na igbe ngosi maka ịhọrọ imeghe usoro ihe omume gosipụtara.
Simplezọ dị mfe bụ: pịa aka nri na akara ngosi USB flash -> Njirimara -> Ngwaọrụ -> Malite Lelee -> Lelee akpaghị aka mmezi faịlụ sistemụ -> Malite, na mmezi ga-agwụ agwụ n'oge na-adịghị anya. Onye ọ bụla nwere ike ịnwale ya, ha ha. O yiri ka ọ dị irè maka draịva siri ike.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị pịa aka nri na akara ngosi ọkụ USB, nhọrọ nhọrọ egwuregwu akpaaka ga-apụta, nke na-abụkarị ihe ịrịba ama nke nje.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na faịlụ Autorun.inf, wepu agwa ma hichapụ ya, wee chọọ faịlụ ahụ nke autorun.inf rụtụrụ aka na ndekọ ndekọ ahụ, ma hichapụ shea sub-item mgbe achọtara ya, wee mbanye D nwere ike ga-emeghe. Malite-agba ọsọ na-abanye "regedit" (ndebanye), jiri "Ctrl + F" chọta a dialog igbe na-abanye "autorun.inf" ịhụ shei subkey, wee pịa-ihichapụ-nri
1. Ọ bụrụ na e nwere faịlụ zoro ezo dị ka autorun.inf na nkebi ọ bụla, ọ kachasị mma ịmalitegharị kọmputa ahụ mgbe ihichapụ ya.
2. Tọgharia usoro mmeghe na ụdị faịlụ (were XP dịka ọmụmaatụ)
Mepee My Computer-Tools-Folder Options-File Type, wee chọta “Drive” ma ọ bụ “nchekwa” (nke ị họọrọ dabere na nsogbu ị na-enwe. Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeghe draịva site na ịpị aka na ịpị aka abụọ, họrọ “Drive” "ma tie Ọ bụrụ na imegheghị folda, họrọ" Nchekwa "). Pịa "Advanced" n'okpuru, na "Dezie Typedị Njikwa" igbe, "Ọhụrụ", jupụta "mepee" na ọrụ (nke a nwere ike jupụta n'ọchịchọ, ọ bụrụ na enwere "mepee" na ọ na-egosi ndị ọzọ amaghị. exe faịlụ, enwere Ọ nwere ike izo aka na ịnyịnya Trojan, họrọ "Dezie"), mejupụta explorer.exe na ngwa ejiri rụọ ọrụ ahụ, ma kwenye. Wee laghachi na windo "Dezie Filedị Njikwa", họrọ "mepee", dozie ya dị ka ụkpụrụ ndabara, ma kwenye. Ugbu a mepee nkebi ma ọ bụ folda iji hụ ma ọ laghachila nkịtị?
3. Iwu ndekọ:
Enweghi ike pinye aka imeghe nkebi
Start-Run-Enter regedit, chọta [HKEY_CLASSES_ROOT \_ Drive \_ shell] ma hichapụ ọdịnaya niile dị n'okpuru shei ahụ, wee mechie ndekọ ahụ, pịa F5 na keyboard iji nweta ume, wee pịa akụkụ abụọ iji hụ.
b. Enweghi ike pinye aka imeghe ebe nchekwa ahu
Start-Run-Enter regedit, chọta [HKEY_CLASSES_ROOT \_ Directory \_ shell] ma hichapụ ọdịnaya niile dị n'okpuru shei ahụ, wee mechie ndekọ ahụ, pịa F5 na keyboard iji nweta ume, wee pịa akụkụ abụọ iji hụ
A ga-eji U disk mee ihe mgbe niile n'ọtụtụ ebe, kọmputa dị iche iche ga-enwekwa ihe egwu nke nje virus. Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na a ga-enwe ọtụtụ nsogbu. Jiri usoro ndị a nwaa ya.
Otu n'ime ngwa ọrụ anyị na-eji ebugharị faịlụ mgbe anyị na-eji eriri USB eme ihe. N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị enyi achọpụtala na mgbe ha na-eji eriri USB, ha enweghị ike imeghe ya site na ịpị abụọ. Ọtụtụ ndị enyi na-eche na diski U ha agbajiri, N'ezie, naanị anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị chọta nsogbu ahụ. Ka anyị leba anya na nsogbu ahụ. Otu esi edozi nsogbu na enweghi ike imeghe U disk.
U disk bụ otu n'ime ihe ọrụ office anyị na-ejikarị arụ ọrụ anyị kwa ụbọchị.Na usoro nke iji U disk, anyị na-ahụkarị ọnọdụ ụfọdụ Dịka ọmụmaatụ, mgbe komputa anyị tinye tinye diski U, anyị na-ahụ na enweghị ike imeghe U disk enweghi ike igwu U disk. Biko atụla ụjọ n'oge a.Enwere ihe ngwọta. Onye editọ na-esonụ ga-akụziri gị usoro iji dozie nsogbu ahụ kọmputa enweghị ike imeghe diski USB.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị ike imeghe USB
Ihe kachasị kpatara na enweghi ike imeghe U disk bụ na sistemu faịlụ mebiri emebi. Commonzọ a na-ahụkarị maka nke a bụ imezi diski ahụ. Pịa aka nri na aka nri “Disk iwepu” ma hota “Njirimara” site na menye menu
Gbanwee na taabụ "Ngwaọrụ", pịa bọtịnụ "Lelee njehie wee malite ịlele", ma lelee ihe abụọ n'otu oge na windo mmapụta.
N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ "mmalite" iji lelee ma mezie njehie disk.
Mgbe usoro dị n'elu adịghị emeghe imeghe U disk, a na-atụ aro ịhazi disk U.
Pịa aka nri na aka nri “Disk iwepu” wee hota “Format” na menu di aka di mma.
Na windo "Hazie" mepee, wepu "Nhazi ngwa" wee pịa bọtịnụ "Malite".
Ọ bụrụ na enweghị ike imeghe kọntaktị USB flash, gbalịa iji eriri USB dochie eriri USB. N'otu oge, jide n'aka na kọmputa mobile nchekwa metụtara ọnọdụ nhọrọ na-adịghị nkwarụ.
Specific ikiri na mwube ụzọ: Mepee "Run" igbe na tinye iwu "gpedit.msc" ịbanye Group Policy Manager.
Pịa "Mọdụl njikwa" → "Sistemụ" → "Nchekwa Mbugharị"
Gbaa mbọ hụ na “Diski Mbugharị: Gọnarị Ikike Ikike” na “Disk Mbugharị Niile: Agọnarị Ikike Ikike” N’akụkụ aka nri ka edobere “Not Configured” ma ọ bụ “Disabled”. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pịa ihe kwekọrọ na ya ugboro abụọ, lelee ihe "nkwarụ" na windo mmapụta wee pịa "OK"
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Windows 10, ị ga-ezute nsogbu dị iche iche, dịka kọmputa enweghị ike ịgbanye ya mgbe etinyere eriri USB ahụ na kọmputa. Yabụ kedu ka isi edozi nsogbu? Ndị na-esonụ nchịkọta akụkọ na-eso kpọmkwem usoro na ụzọ gị.
Ngwaọrụ / Akụrụngwa
01 Malite sistemụ arụmọrụ nke Windows 10, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ. Pịa na igbe nchọta ihe nchọgharị iji bido iji Cortana (Xiao Na) onye enyemaka olu nwere ọgụgụ isi.
02 Dịka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ, tinye "Faịlụ Njikwa" na igbe ọchụchọ. Cortana (Xiao Na) na-egosiputa nsonaazụ ọchụchọ ahụ, pịa na "Ihe kacha mma egwuregwu → File Explorer".
03 Kpọọ windo mmemme "Resource Manager", dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ. Mụbawanye osisi yiri ndekọ usoro ke n'aka ekpe ma họrọ "My U Disk" akara ngosi.
04 Dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ, pịa aka nri na akara ngosi "My U Disk". Mepụta ụzọ mkpirisi, họrọ ihe "Njirimara".
05 Igbe igbe “My U Disk” puta, dika egosiri na onu ogugu. Họrọ taabụ "Ngwaọrụ", nzọụkwụ ọzọ ga-abụ itinye kọmputa ahụ na U disk ma ọ gaghị emeghe.